Puntland & Soomaaliland oo shaaciyay kiisas cusub oo Coronavirus ah - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Puntland & Soomaaliland oo shaaciyay kiisas cusub oo Coronavirus ah
Soomaaliland ayaa Maanta soo bandhigtay natiijada dad looga shakisnaa Cudurka Safmareenka ah ee Coronavirus,kuwaas oo baaritaano lagu sameeyey qaarkood laga helay Cudurka COVID-19.
War kasoo baxay Guddiga Soomaaliland u qaabilsan xakameynta Cudurka COVID-19 ayaa lagu sheegay in la baaray 40 qof balse cudurka laga helay 8 ruux,kuwaas oo dhamaantood ku sugan Magaalada Hargeysa,kuwaas oo ku jira xaalad karantiil ah.
Dadka Cudurka laga helay ayaa Guddiga waxaa ay sheegeen inay da’dooda u dhaxeyso 9 jir ilaa 59 Sano jir halka ay Cudurka ka bogsadeen Saddex Ruux.
Ugu dambeyn Guddiga waxaa ay sheegeen in tirada Guud ee Cudurka Coronavirus laga helay deegaannada Soomaaliland ay gaartay 384 Ruux 57 Qof ay ka bogsoodeen halka 22 Ruux ay u geeriyoodeen.
Dhinaca kale War kasoo baxay Wasaaradda Caafimaadka Puntland ayaa waxaa lagu sheegay in maanta la baaray 14 qof, balse xanuunka laga helay 2 ruux oo kala ah rag iyo dumar, kuwaas oo ku sugan Magaalada Garoowe.
Sidoo kale Wasaaradda waxaa ay sheegtay in Tirada guud ee dadka xanuunka laga helay deegaanada Puntland ay gaartay 194 qof, waxaa u dhintay 6 qof halka ay ka bogsadeen 19 qof.
Previous articleDAAWO:-Maxaa ka soo bixi kara baarista xasuuqii Gololeey? (Warbixin)
Next articleDHAGEYSO:-Warka Duhur ee Radio Risaala 04-06-2020